2011 I-cyber Monday infographic » Martech Zone
NgeCawa, ngo-Novemba 27, 2011 NgoMgqibelo, Novemba 26, 2011 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu
NgoMvulo weCyber ​​wabizwa ngo-2005. NgoMsombuluko abathengi bafika kwiivenkile ezikwi-Intanethi ngoMvulo emva koMbulelo. Ngo-2010, uMvulo weCyber ​​ungenise isigidi seedola kwingeniso, ikhula nge-13% ngaphezulu ko-2009. NgoLwesihlanu omnyama abathengisi banikezela ngeyona misebenzi yabo mihle yonyaka ukwenzela ukurhwebesha abathengi kunye nabathengi bahlala bekhempisha iiyure ezininzi ukufumana amanqaku izinto. NgoMvulo weCyber ​​ulandela kwaye ujolise kwi-online shopper.
Okumangalisayo kukuba, uLwesihlanu omnyama kunye noMsombuluko weCyber ​​ayizizo ezona ntsuku zokuthenga eMelika…
I-infographic evela SEO.com.
tags: kwi-cyber mondayNgomvulo nge-infographickwi-infographic
I-WordPress: Yongeza iBar yomyalezo ophezulu
Novemba 27, 2011 ngo-3: 01 PM